Bokin'ny Jobily: Fahasamihafan'ny versiona - Wikipedia
Bokin'ny Jobily: Fahasamihafan'ny versiona
Bokin'ny Jobily (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Novambra 2019 à 03:41
18 octets ajoutés , il y a 2 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Novambra 2019 à 03:35 (hanova)
k (Tsipelina sy rohy)
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Novambra 2019 à 03:41 (hanova) (esory)
Ny [[Bokin'ny Jobily|'''Bokin'ny Jobily''']] dia boky tsy hita afa-tsy ao amin’ny [[Baiboly ortodoksa|Baiboly ortodoksa etiopiana]]. Ny tanjon’ilay boky dia ny hamporisika ny [[Jiosy]] amin’ny fifikirana amin’ny [[Torah]], amin’ny fotoana nahatonga ny Jiosy hiharan’ny kolontsaina jentilisa.
Misy ny tantaran’izao tontolo izao (ny niandohany sy ny hiafarany) araka ny nitantaran’ny “anjelin’ny fanatrehana” an’izany tamin’i [[Mosesy]] teo amin’ny [[Tendrombohitra Sinay (Baiboly)|tendrombohitra Sinay]] io boky io. Ny ampahany be amin’ny fitantarana, izay miendrika angano, dia manampy ny fitantarana ao amin’ny [[Bokin'ny Genesisy]] sy ny [[Bokin'ny Eksodosy]] (hatramin’ny toko faha-12) mba haneho ny maha ambony lanja indrindra ny Torah. Voatantara ao hatramin’ny [[Famoronana (finoana sy fedrà)|Famorona]] izao tontolo izao ka hatramin’ny nanorenana ny fetin'ny [[Paska jiosy]]. Voaresaka koa ny amin’ireo Patriarka hebreo. Ny fahotana nataon’ny [[Hebreo (mponina)|Hebreo]] izay voasoratra ao amin’ny Baiboly dia tsy voaresaka firy ao. Ahitana lohahevitra momba ny [[Andro farany|fiafaran’izao tontolo izao]] (apokaliptika sy [[Eskatolojia|eskatolojika]]) ny ao amin’ilay boky ka ahafahana mahazo bebe kokoa ireo lohahevitra eskatolojikan’ny boky ao amin’ny [[Testamenta Taloha]] sy [[Testamenta Vaovao]]. Asehon’ny boky fa ireo Patriarka dia efa nanaja ny [[Lalàn'i Mosesy|Lalàn’i Mosesy]].
Ny Bokin’ny Jobily dia tsy hita na ao amin’ny Baiboly hebreo ([[Tanakh]]) na ao amin’ny [[Septoaginta]] na Septanta koa. Ny Katolika sy ny Protestanta ary ny Ortodoksa tatsinanana dia manasokajy azy ho [[Apokrifan'ny Baiboly|apokrifa]] na [[Pseodepigrafa (protestantisma)|pseodepigrafa]].
== Ny anaran’ny boky ==
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/976712"